Hamaly faty? Ny talen'ny mpanatanteraka UNWTO Carlos Vogeler
Home » Travel Associations News » Hamaly faty? Ny talen'ny mpanatanteraka UNWTO Carlos Vogeler
Desambra 9, 2017
Ny 29 Novambra dia momba ny fanomezam-boninahitra an'i Carlos Vogeler, tale mpanatanteraky ny World Tourism Organization (UNWTO) nandritra ny fivoriana farany nataon'ny UNWTO Conference on Jobs ary ny fitomboana in Montego Bay Jamaica. Vogeler dia nomem-boninahitra avy amin'ny minisitry ny Jamaika, Bartlett nandritra ny 9 taona niasa mafy ho an'ny UNWTO.
Ny Hon. Ed Bartlett, Minisitry ny fizahantany any Jamaika, dia nilaza tamin'ny solontena tonga nanatrika ny 1400 fa ny fanomezam-boninahitra an'i Carlos Vogeler anio; Omaly dia momba ny fanajana ny Taleb Rifai izany. ”
Ny tsy fantatry ny mpanatrika dia noroahin'ilay sekretera jeneralin'ny UNWTO vaovao Zurab nanomboka ny 1 Janoary 2018.
Nanampy tamin'ny Facebook-ny ny mpanonta eTN Juergen Steinmetz tamin'ny 29 Novambra "Tokony ho menatra ny tenany i Zurab." Kojo Bentum-Williams nanampy tamin'ny lahatsoratra Facebook: “Marina? Carlos, sahala amin'i Rifai, dia manana halaliny sy fahalalana eo amin'ny tontolon'ny fizahan-tany. ”
Tamin'ny valifaty miharihary nataon'ny sekretera voafidy iray ao amin'ny UNWTO, Zurab Pololikashvil, ity fanapahan-kevitra ity dia natao ho hetsika voalohany manome tsiro ny UNWTO ho avy eo ambany fitarihan'i Zurab ho avy.
Tsy nisy fahasamihafana ho an'i Zurab ny fahafantarana an'i Vogeler fa mila 9 volana hafa fotsiny ho an'ny fisotroan-dronono UNWTO ary hitazomana ny fiantoham-piainany.
Vogeler dia vonona ny handray andraikitra tsy misy fitaomana fa io fanalam-baraka io dia mbola tsy ampy ho an'ny Sekretera jeneraly Zeorziana ho avy haneho fiovam-po. Ilaina maika ny fiantohana ara-pahasalamana noho ny fanamby ara-pahasalamana lalovan'ny vadin'i Vogeler. Tao amin'ny fahafaham-baraka iray hafa ho an'i Vogeler Zurab dia nilaza fa hitazona ireo talen'ny mpanatanteraka hafa izy.
Tsy nanatrika ny kaonferansa Jamaika i Pololikashvil.
Andriamatoa Vogeler dia nanokana ny asany hatrany. Ny ankamaroan'ny mpitondra an'izao tontolo izao dia mihevitra azy ho lehilahy faharoa ao amin'ny UNWTO. Ny dia sy fizahan-tany dia asa 24/7 ho an'i Carlos, ary naneho izany. Tamin'ny Fihaonambe maharitra momba ny fizahan-tany any Jamaika dia nanome ny tsara indrindra izy ary nitarika ny delegasion'ny UNWTO niaraka tamin'i Taleb Rifai.
Izy io dia miresaka tsara amin'ny toetrany. Tsy nilaza ny fanaintainany i Carlos nandritra ny kaonferansa UNWTO Jamaica farany teo ary nanao toy ny mahazatra hatrany: Matihanina sy tsy mivadika ary manaja. Raha ny tena izy dia tsy maintsy nahatsapa famadihana izy ary tokony ho nangidy sy tezitra izy.
Ny mazava ho azy dia nanorotoro ny hatok'Andriamatoa Vogeler dia ny fifidianana ny style roller coaster ho an'ny sekretera jeneraly raha niara-niasa tamin'ny Ambasadaoro Dho Young-Shim avy any Korea atsimo nanohitra ny maso ivoho Zurab Pololikashvil avy any Georgia. Zurab dia mety nandresy tamin'ny fifidianana tamin'ny alàlan'ny fanohanan'ny sekretera jeneraly ankehitriny Taleb Rifai izay nametraka ny lazany manokana rehefa nanentana mafy ny UNWTO General Assembly izy mba tsy hiroso amin'ny fifidianana miafina ho an'ny fanamafisana ny sekretera jeneraly ary nanosika hanamafisana an'i Zurab amin'ny alàlan'ny fiantsoana.
Tamin'ny volana aprily Andriamatoa Vogeler dia nilaza hoe: “Amin'izao fotoana iasako asa matihanina izao dia tsy handeha hiloka amin'ny ho avin'ny fikambanana, na amin'ity sehatra ity aho. Fantatro ny haben'ny andraikitry ny filankevitra mpanatanteraka amin'ny fifidianana SG manaraka. Tsy fotoana hanaovana andrana izao, hanaovana risika na fitondrana revolisiona. Ary tsy izao no fotoana hanaovana ego. ”
Inona koa no hitranga aorian'ny 1 Janoary 2018, mijanona ho tsiambaratelo voahazona tsara ary miteraka tontolo tsy azo antoka.
Sarotra tamin'Andriamatoa Vogeler ny nanafina ny fanaintainany rehefa natolotry ny minisitry ny Jamaikana mari-pahaizana zava-bita tamin'ny Montego Bay.
Talohan'ny nidiran'Andriamatoa Carlos Vogeler tamin'ny UNWTO tamin'ny taona 2005 dia profesora niasa tao amin'ny University "Rey Juan Carlos", Madrid, tao amin'ny Dpt izy. an'ny Business Economics, mpampianatra tsy tapaka ao amin'ny Oniversite Espaniôla sy Iraisam-pirenena ary mpanoratra boky fianarana an-tsekoly isan-karazany, ary koa lahatsoratra maro momba ny firafitry ny fizahan-tany iraisam-pirenena.
Andriamatoa Vogeler dia nanomboka ny asany tamin'ny sehatra tsy miankina tao Pullmantur, iray amin'ireo Operatera fitsangatsanganana Espaniola lehibe indrindra. Nandritra ny enina ambin'ny folo taona niasany tamin'ny 1974 ka hatramin'ny 1990 dia lasa Tale Mpanatanteraka lefitra izy ary nanolotra zava-baovao maro, dia ny fanitarana ny isan'ny toerana sy vokatra ary ny fanokafana birao vaovao sy tsena vaovao. Izy koa dia nitana andraikitra mavitrika tamin'ny filankevi-pitantanan'ny Fikambanan'ny Travel Agencies an'ny maso ivoho ary ny UFTAA (United Federation of Travel Agent's Associations), izay nitantanany ny komity momba ny fitaterana an-dàlana.
Nanomboka tamin'ny 1991 ka hatramin'ny 2008 dia niasa tamina toerana ambony fitantanana zokiolona tao amin'ny Group RCI, ampahany amin'ny Wyndham Worldwide, iray amin'ireo vondrona mandray vahiny lehibe indrindra eran'izao tontolo izao, voatonona tao amin'ny New York Stock Exchange, izay izy no talen'ny fitantanan-draharaha ho an'ny Eropa Andrefana Andrefana, mandrakotra an'i Espana, France, Portugal ary Benelux ary avy eo dia ny filoha lefitra misahana ny paikady eran-tany sy ny fifandraisan'ny indostria.
Voafidy ho filohan'ny mpikambana afiliana ao amin'ny World Tourism Organization (UNWTO) nanomboka ny taona 2005 ka hatramin'ny 2008, nisolo tena ny Group RCI. Nanomboka ny taona 1997 dia niasa ho filoha lefitry ny filankevitry ny mpikambana ao amin'ny Affiliate izy ary filohan'ny filankevitry ny orinasa ary mpikambana ao amin'ny Vondrona stratejika UNWTO.
Izy koa dia mpikambana mpanorina ny Fikambanana Espaniola manam-pahaizana momba ny fizahan-tany (AECIT) ary mpikambana ao amin'ny International Association of Experts in Tourism (AIEST).
Nahavita ny fianarany tany Kanada sy tany Espana, nahazo diplaoma tamin'ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany nataon'i "Escuela Oficial de Turismo de Madrid" (University Rey Juan Carlos ankehitriny) ary nahazo diplaoma avy amin'ny IESE Business School, ao amin'ny University of Navarra - Spain.
Atoa Vogeler dia teraka tany Venezoela renin'ny Espaniola renim-pianakaviana Venezoeliana-Alemanina ary zom-pirenen'i Espana sy Venezoela.
Ny minisitry ny fizahantany any Jamaika Ed Bartlett dia nilaza tamin'ny eTN, Carlos Vogeler dia mendrika kokoa.